Margarekha चार सय नागरिक बेपत्ता कि मृतक कुन कुन जिल्लामा कति – Margarekha
चार सय नागरिक बेपत्ता कि मृतक कुन कुन जिल्लामा कति
काठमाडौं : बेपत्ता आयोगले द्वन्द्वकालमा हराएका झन्डै चार सय नागरिकको ‘मृत्यु भएको’ अनुमानसहित बाँकी छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा फाइल पठाएको छ ।
बेपत्ता आयोगले आफैंले अनुसन्धान नगरी ‘मृत्यु भएको अनुमान’का आधारमा चार सय १५ जनाको फाइल टीआरसी पठाएपछि पीडित परिवार आक्रोशित भएका छन् । ‘बेपत्ता आयोगबाट झन्डै चार सयको उजुरीको फाइल प्राप्त भएको छ । अहिले टिपोट बनाएर हेर्ने काम भइरहेको छ,’ टीआरसीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तिनीहरू बेपत्ता हुन् भने बेपत्ता आयोगकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यस्तो भेटिएमा हामी हेर्दैनौं । मृतक हुन् भने यसै पनि टीआरसीको छानबिनभित्रै पर्ने हो ।’ उदासीले प्रारम्भिक छानबिनपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने बताए ।
बेपत्ता आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले पनि शान्ति मन्त्रालयको सूचीमा मृतक जनाइएकाले बाँकी अनुसन्धानका लागि टीआरसीको जिम्मा लगाइएको बताए । ‘सरकारको आधिकारिक निकायले राखेको अभिलेखलाई मान्ने कि नमान्ने ? ’ सचिव निरौलाले भने, ‘टीआरसीमा पठाइएका व्यक्ति शान्ति मन्त्रालयमा मृतकको सूचीमा छन् ।’
‘सरकारको आधिकारिक निकायले राखेको अभिलेखलाई मान्ने कि नमान्ने ? टीआरसीमा पठाइएका व्यक्ति शान्ति मन्त्रालयमा मृतकको सूचीमा छन् ।’ – नृपध्वज निरौला, सचिव, बेपत्ता आयोग
विगतमा राज्यले हत्या गरिएका परिवारजनलाई राहत दिएको तर बेपत्ता पारिएका परिवारजनलाई राहत नदिइएको अवस्थामा बेपत्ताका सन्ततीलाई नागरिकता सिफारिस, घरजग्गा नामसारी, रोजगारी, पेन्सन हस्तान्तरणलगायत व्यावहारिक समस्याका कारण थुप्रै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनले बाध्यतावश बेपत्ता आफन्तजनलाई ‘मृत्यु’ को सूचीमा दर्ता गराएका पनि छन् । यसरी बिनातथ्य मृत्युमा दर्ता गरे पनि अझै काजक्रिया भने भएको छैन । ‘हत्या ठहर भएको हो भने कहा“, कसरी, कहिले, किन भएको भनेर पीडितले यथार्थ जानकारी पाउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।अन्नपुर्ण पोष्ट्बाट
सर्वाधिक बेपत्ता कहाँ-कहाँ ?
१८ पुष २०७४, मंगलवार ०८:३४ प्रकाशित